Xeerilaaliye: Sawir wanaagsan ayaa laga haystaa dhacdadii lagu diley - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeerilaaliye: Sawir wanaagsan ayaa laga haystaa dhacdadii lagu diley
La cusbooneeyay onsdag 17 maj kl 10.11
La daabacay onsdag 17 maj kl 09.12
sawir: Mats Andersson
Dhacdadii gabadh 19-jir ahayd oo meedkeedii la heley habeen-nimadii isniintii ina dhafaftay ayaa markiiba loo qabtay saddex nin oo dhallin-yaro ah oo iminka lagu tuhun-san yahay iney dilka gabadha ka dambeeyeen.
Habka wax u dhaceen iyo af-duubkii la tuhun-sanaa in gabadha la af-duubey ayaa laga haystaa sawir wanaag-san, sida uu sheegay xeer-ilaaliye Christer Sammens.
-Fikirka aan ka qabaa wuxuu yahay in sawir waadix ah laga heeysto wixii dhacay. Inkastoo baaristu aanay maalmo badan socon, sida uu sheegay.
Saddex nin oo dembi-faleedkan lagu tuhun-san yahay oo ku jira ruumanka ayuu ciidanka ammaanku shalay la yeeshay wareeysiyo, hase yeeshee uu xeer-ilaaliye Christer Sammens ka gaabsaday inuu ka faaloodo natiijadii ka soo baxday. Hase yeeshee la soo ban-dhigi doono in ruumanka lagu sii hayo.
-Waa arrin aam maanta go’aan ka gaari doono, sida uu sheegay, iyada oo gelinka dambe laga gaari doono go’aan kama dambeeys ah, sida uu sheegay xeer-ilaaliyaha gacanta ku haya dacwaddani Christer Sammens.
Xeerilaaliye qiray in la heley maydii gabar 19 jir ahayd oo la la'aa
tisdag 16 maj kl 14.51